WARARKA CALAMKA – Shacabka News
Category: WARARKA CALAMKA
Dibad-baxyo Ka socda Dalka Tunisia.
Sida ay sheegayaan warbaahinta dalka Tunisia hal qof ayaa ku dhintay dibad-baxyo looga soo horjeedo xukuumadda kuwaas oo ka dhacay Tiberias.
Dibad-baxyaasha ayaa waxay ka careysanyihiin sare u kac ku yimid qiimaha badeecada iyo canshuur cusub oo lagu soo rogay magaalooyin ka tirsan dalkaasi.
Sidoo kale dibad baxaan ayaa waxaa ku dhaawacmay 5 qof oo kale ka dib markii uu isku dhac uu dhex maray dibadbaxyada iyo ciidamada ammaanka sida ay sheegeen dad ku sugan magaalo ku taallo galbeedka caasimadda Tunisia.
Dibad-baxyaasha ayaa waxay ku fideen ku dhawaad 10 magaalo oo ka tirsan Tunisa waxaana ka mida magaalooyinka ay ku faafeen dibad-baxyaashaan Sidi Bouzid, Bou Hajla.
Ciidamada ammaanka ayaa waxay adeegsadeen gaaska indhaha ka ilmisiiya si ay u kala ceyriyaan dibad baxyaasha ka cabanaya sare u kaca ku yimid badeecooyinka canshuuraha cusub ee lagu kordhiyey.
Author Mohamed YarePosted on 09/01/2018 Categories WARARKA CALAMKALeave a comment on Dibad-baxyo Ka socda Dalka Tunisia.
Author Mohamed YarePosted on 09/01/2018 09/01/2018 Categories WARARKA CALAMKALeave a comment on Suudaan: Waxaa la Fashiliyey isku Day lagu Doonayey in si Sharci Darro ah lagu Galiyo Dalka Chad 85 KGM oo Dahab ah
Author Mohamed YarePosted on 09/01/2018 Categories WARARKA CALAMKALeave a comment on Fadeexada ka dhalatay Cod sir ah oo laga qabtay Sirdoonka Masar iyo Xiisada Qudus.
YAAB: Baraf ka Da’ay lama Dagaanka Saxaraha Aljeeriya (SAWIRO).
Dhulka lama degaanka Saxaraha Aljeeriya ayaa shalay lagu arkay baraf badan kadib isbedal ku yimid cimilada, dhulkan oo kamid ah deegaanada ugu kulul dunnida ayaan lagu aqoon cimiladan qabowga.
Isbedalka cimilada dunnida ayaa sanadkan cusub laga dareemayaa wadamo badan sida Yurub iyo wadanka Maraykanka oo xiligan ku jira cimilo aad u qabow iyo baraf hakad ku keenay isu socodka magaalooyinka waaweyn ee saaran bariga dalka Maraykanka.
Halka dalka Australia maalmihii lasoo dhaafay laga dareemayey kuleyl xad dhaaf ah.
Khubarada cimilada ayaa sheegaya inay tani qeyb ka tahay isbedalka ku imaanaya cimilada guud ahan dunnida.
Waxaana laga cabsi qaba isbedaladan inay saameyn xun ku yeeshaan qeybo kamid ah qaarada Afrika gaar ahaan bariga Afrika iyo dalka Soomaaliya oo sanadihii lasoo dhaafay ay ka jireen abaaro, waxaana muuqata in sanadihii lasoo dhaafay uu hoos usii dhacayeen roobabka ka da’a wadanka Soomaaliya.
Author Mohamed YarePosted on 09/01/2018 09/01/2018 Categories WARARKA CALAMKALeave a comment on YAAB: Baraf ka Da’ay lama Dagaanka Saxaraha Aljeeriya (SAWIRO).
Author Mohamed YarePosted on 08/01/2018 Categories WARARKA CALAMKALeave a comment on Shirkadda Twitterka oo Diiday inay Xirto Bogga Donald Trump.
Nigeria oo soo daadgureysay Tahriibayaal ku xanibnaa Libya.
Dawlada Nigeria ayaa dalkeeda dib ugu soo celisay boqolaal tahriibayaal dalkaasi u dhashay oo muddo dheer ku xanibnaa wadanka Liibiya.
In ka badan 500 Tahriibayaal u dhashay Nigeria ayaa gaaray wadankooda, kadib markii ay dowladooda u dirtay diyaarad.
Dhalinyaradan ayaa ah qeybtii ugu horeysay iyadoo lagu wado in dalkooda lagu celiyo in ka badan 5000 u dhashay Nigeria oo ku sugan Liibiya.
Xukuumada Nigeria ayaa kamid ah dalalka Afrika ee bilaabay inay u gurmadaan muwaadiniintooda ku xaniban wadanka Liibiya.
Wadamada Afrika ayaa dhamaadkii sanadkii tagay bilaabay dadaal ay wax ugu qabanayaan dhalinyarada Tahriibta u aada Liibiya, kadib markii warbaahinta caalamiga ah ay soo bandhigeen qaabka xun ee loola dhaqmo tahriibayaasha marka ay tagaan Liibiya oo lagu tilmaamay “…Adoonsi iyo Jirdil…”
Author Mohamed YarePosted on 08/01/2018 Categories WARARKA CALAMKALeave a comment on Nigeria oo soo daadgureysay Tahriibayaal ku xanibnaa Libya.
Author Mohamed YarePosted on 08/01/2018 Categories WARARKA CALAMKALeave a comment on Egypt: Axmed Shafiq oo isaga haray tartanka Doorashada Madaxweynaha
Malaysia: Mahathir oo markale u tartamaya xilka Raysalwasaaraha.
Author Mohamed YarePosted on 08/01/2018 Categories WARARKA CALAMKALeave a comment on Malaysia: Mahathir oo markale u tartamaya xilka Raysalwasaaraha.
Author Mohamed YarePosted on 07/01/2018 07/01/2018 Categories WARARKA CALAMKALeave a comment on Rwanda iyo Ugandha oo beeniyey inay heshiis qaxooti la galeen Israel.